Iggitiin magaalaa Siidnii sa’aa 16 booda du’a nama 3 xumurame - Walabu Media | Oromo News & Opinions
Home Siyaasa Addunyaa Iggitiin magaalaa Siidnii sa’aa 16 booda du’a nama 3 xumurame
Iggitiin magaalaa Siidnii sa’aa 16 oliif ture, du’a nama sadiin goolabame: namoota iggitaman lamaafi kan Namoonni 4 biroos madaahanii gara hospitaalaatti geeffamaniiru. Kanniin iggitamanii turan keessaa nannoo nama 15 dursanii miliquun isaaniis bekameera. Iggitii kanatti xumura kan laatan woraanaafi poolisiin biyyattii woliin ta’uudhaan, akka gabaasa CNN tti.
Hidhataan namoota iggite kuni, Maan Haaron Monis, nama Iraan irraa Awustraaliyatti baqaan gale ture. Koolugaltummaan isaa bara 1996 kan fudhatama argate. Gama biraatiin Ob. Monis nama amantaa isaa Shi’aa irraa gara Sunniitti kan jijjiirateedha. Hidhataan kuni maaliidhaaf akka ummata iggite wonti qajeelatti beekame kan hinjirre ta’us, worra Biyya Islaamaatiin quba wolqabaachuu hinoolu kan jedhu shakkiin jiru. Akka gabaasa BBC tti ob.Monis nama himannaan heddu irratti banamee ture; garuu wobiidhaan kan jiraataa ture.
Sababa iggitii kanaan guyyaa har’aa jidduun magaalaa Siidnii cufamee ture. Hidhataan ummata dukkaana keessatti too’annaa jala oolche, iggitamtoonni isaa alaabaa Biyya Islaamaa ‘Islamic State’ foddaa irraan akka olqaban ajajee ture. Isaanis kana godhuuf dirqamaniiru.
Muummichi Ministera biyyattii, Toonii Abot, gadda itti dhagahame ibsee, kanniin lubuu dhabanii fi kanniin madaayaniif faana yaadaan jiraachuu isaas dubbateera. Gurmuun Muslimoota Awustraaliyaa 40 tankaarfiin hidhataan kuni fudhate kan isaan rifachiise ta’uu ibseera.
Hidhataan kuni osoo hinajjeefamin dura alaabaa Biyya Islaamaa gaafatee, akkasumas Mummicha Ministeeraa bilbilaan dubbisuu akka barbaadu saba-himaa hedduttii dubbatee ture. Hidhataan kuni tankaarfii inni fudhateef jecha poolisiin ummata Muslimaa irratti tankaarfii haloo bahuu akka fudhachuu irraa uf eegan akeekkachiiseera. Maddi CNN fi BBC.
iggitii magaalaa siidnii
nama dirqiin qabachuu
Previous articleManchastar, Arsenaal, Cheelsii fi Manchastar Siitiin yoo injifatan, Liivarpuul ammas qabxii gate
Next articleHidhattoonni Taalibaan Paakistaan keessatti namoota 145 ajjeesan;132 barattoota